दुर्गम र सुगमको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण : तपाईंको स्थानीय तह कुन वर्गमा ? « जालपा न्युज Jalapa News
दुर्गम र सुगमको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण : तपाईंको स्थानीय तह कुन वर्गमा ?
साथै वर्गीकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका प्राथमिकता तय गर्न समेत उपयोगी हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनमा नै अन्तिम सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो समाचारमा उज्यालो अनलाइनमा मदन पौड्यालले लेखेका छन्